Linux dzimwe nzira kuWindows, ikozvino izvo W7 inofa | Linux Vakapindwa muropa
pablinux | | Kugoverwa, Linux vs. Windows
Makore anodarika gumi apfuura, Microsoft yakatanga Windows 10. Pakutanga, kambani iyo Satya Nadella parizvino inomhanya kufunga kuburitsa nhau seSevhisi Pack ichagadzirisa matambudziko ese eWindows Vista, asi njodzi yaive yakakura zvekuti vakafunga gadzira blur uye nyowani account kuvhura imwe yekushandisa system. Mumazuva mashoma, Windows 7 haichazotsigirwa, saka muchinyorwa chino tichataura nezve akanakisa Linux mamwe maWindows, kana paine mumwe munhu anga afunga kuita yekupedzisira kusvetuka kana kukubatsira iwe kuti udaro.
Asi ndisati ndatanga ndinoda kutaura chimwe chinhu: Linux haizombove Windows uye Windows haizombove Linux (kana macOS). Imwe neimwe sisitimu yekushandisa inoshandisa mashandisirwo ayo uye, kunyangwe paine software yekuteedzera senge WINE, rutsigiro haruzombove rwakafanana. Neizvi zvakatsanangurwa, izvo zvauchazove nazvo zvinotevera kugoverwa kuzhinji kuchazove imwe yeakareruka kushandisa kune avo vasina kumbobata Linux, zvimwe nekuda kwekugadzirwa kwayo.
2 Linux Mint (Cinnamon)
4 Fern OS
5 Yakadzika OS
6 Zvimwe: Robolinux
Zorin OS (chinyorwa nezve yazvino vhezheni pano) ndeimwe yesarudzo dzakanakisa kune vashandisi veWindows vanoda kusimudzira kuLinux. Muchokwadi, chimwe chezvikonzero zvavo chekuve kuri kuitisa izvi, izvo zvavanoshandisa interface uye yakajairika mufananidzo iyo ichave inozivikanwa kune vashandisi veMicrosoft masystem.
Iyo yakavakirwa paUbuntu, zvinoreva kuti ichave inoenderana zvizere nezvakawanda zvezvinhu izvo Canonical inowedzera, kunyangwe vachiwanzosvika zvishoma gare gare. Inosanganisira mamwe mapakeji e WINE kuitira kuti tikwanise kumhanyisa mafomu muExpE fomati asi, sezvatataura pamusoro, kunyangwe zvikashanda, hazvizove 100% zvakafanana.
Imwe yeakanakisa Linux dzimwe nzira dzeWindows uye iyo yakave yakakurumbira muchikamu cheiyi Linux Mint. Muchokwadi, iyo yekushandisa interface ye Cinnamon Iyo yakafanana chaizvo neiyo inoshandiswa neWindows 7 iyo inofa mumazuva mashoma, ine bharamu repasi uye nekaviri yekutanga menyu ine yayo yekutsvaga bar.
SaZorin OS, ndizvo zvichibva paUbuntu, mushanduro dzayo dzeLTS, saka zvinoenderana nemabasa ese anowedzerwa neCanonical, kunyangwe mamwe achizosvika makore maviri anonoka. Iyo inowanzo shanda chaizvo mushe pamakomputa ane mashoma zviwanikwa, inozove yekuwedzera kune vashandisi vaneta nekunonoka kweWindows masisitimu.
Solus inoshanda sisitimu iyo vanoda Windows 7 vasingade zvakanyanya, asi zvishoma kune izvo zveW10. Inoshandisa iyo Rolling Regedzera yekuvandudza modhi, zvinoreva kuti ichagara ichifambirana, uye mashandisirwo ayo mushandisi anosanganisira mhando ye "Control Center" kurudyi inoyeuchidza yazvino vhezheni yeMicrosoft's system.
Mamiriro ekunze anoshandiswa naSolus ndeaya Budgie, inokwezva "diki" nharaunda inosanganisira yekutanga menyu pazasi kuruboshwe, senge chero kugovera kunoda kuita kunge Windows. Iyo yekukurumidza yekuwana bhar kurudyi inotibvumidza isu kuwana zviyeuchidzo, masystem ehurongwa, iyo khalendari uye zvimwe sarudzo senge multimedia kutamba.
Kudzokera kuUbuntu-based masisitimu, Feren OS iri kugovera iyo inowedzera WINE inoenderana dura. Iyo graphical nharaunda yaanoshandisa ndiCinnamon, asi imwe inoita kuti yekutanga menyu itaridze zvakanyanya kufanana neWindows 10 kupfuura yepamutemo Linux Mint. Mune ayo azvino vhezheni inoshandisa Plasma, saka inogona kunge iri zano rakanaka kupinda muLinux nyika uine yekutanga vhezheni uye, kana iwe uchinge wajaira kwazviri, enda kune yazvino vhezheni yeFeren OS iyo, isu tinorangarira, inosanganisira yekutanga start. neWINE.
Izvi ndakawedzera mune irondedzero nekuti rinotaridzika senge Windows uye nekuda kwayo dhizaini inokwezva. Bhawa repazasi (rakasiyana nemufananidzo wapfuura) uye menyu kurudyi ichatiyeuchidza nezvechisungo chaMicrosoft, icho chingaite kuti tinzwe kugadzikana. Kune rimwe divi, dhizaini ichagara ichiita kuti tirambe tichifarira uye ichaita kuti tinakidzwe neruzivo rwakanaka.
Ndakaiyedza kuti iite ongororo, ndinofanira kureurura kuti haisi mugove izvo zvandinoda nekuda kwechifananidzo chayo, asi pano tiri kutaura nezve dzimwe nzira dzeLinux dzeWindows uye robolinux ndomumwe wavo. Imhaka yekuti inosanganisira maturusi nekukasira izvo zvinotibvumidza isu kuti tiise zvese zvinodiwa kumhanyisa Windows zvirongwa, kungave kuburikidza neWINE kana kurodha pasi Windows kuiisa muVirtualbox.
Zvino izvo Windows 7 iri kufa, iwe urikuuya, handiti? Ndeupi kugovera kweLinux kwaunotanga kushandisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Zvirinani Linux dzimwe nzira kuWindows, ikozvino iyo W7 iri kuzofa
Senguva dzose, Mageia akakupfuudza, imwe yedzakanakisa dzimwe nzira, kana isiri yakanakisa, kune avo vanobva kuWindows. Iyo ine kuzivikanwa kukuru kwehardware, ese anogona madesktop mamaneja kusarudza kubva, ichiri inochengetedza zvese 32Bits uye 64Bits zvivakwa, hombe software mukati mezvitoro, imwechete sisitimu yekudzora nzvimbo muLinux, uye zvese zviri pamutemo graph….
Ongororo yakanaka kwazvo, inoita senge dzimwe nzira dzakanaka kwazvo, nerombo rakanaka munyika yedu yeGNU / Linux isu tine zvakawanda zvingasarudzwa, isu tinongofanirwa kukwira kuenda kuGNU / Linux, izvo zvisina kunetsa mazuva ano. Yakanaka kwazvo nyaya kukwazisa.
Linux kodhi inotyisa. Distros haishande akadaro
Ndine 1 tower PC (desktop), imwe yekare PC yeshongwe, makore matatu ekuberekwa, uye imwe makore matanhatu ekuberekwa. MUZVESE ZVAVO, Chero CHINOKWANISA CHEMA 6 NDAKAEDZA, CHINOSHURE CHEMAI CHITEMA CHERUFU, HANGS KANA KUENDA ZVINONOKA. Iko kuiswa kwekutambudzika. Kwandiri vese avo vanodzivirira Linux vanogona kuenda shit kana ziya nedhuku ravo rakashata linux kodhi iyo: «sudo- su sudao- sudo fomati -su - autodestruction -sudas - sudo su»
Ndinonamira ne XP uye W7. ZVESE zvimwe zvinhu (Linux, W10, nezvimwewo) ndeye TORASI uye yakakura nguva kunyura.
Pindura kuLinux kodhi inotyisa. Distros haishande
Uchishandisa Windows XP parizvino?
Ini handikwanise kutaura kana uri akaremara hacker uchitsvaga vanyajambwa kana troll ine hafu yehuropi uye yakawanda yemahara nguva ...
Zvisinei, kana iwe uri wakakomba uye uchida kuyedza chimwe chinhu, shandisa PUPPY LINUX: inomhanya zvirinani kupfuura chero isingatarisirwe XP.
Mwedzi 18 yekutsigira inguva pfupi kwazvo yemushandisi weLinux. Shanduro dzeLTS dzinogara dziri nani kune vashandisi kutanga paLinux.
RimaSeid Warp akadaro
Ndiri kuenda kuchinjira kuArcaOS (Kubva pane OS / 2 Warp). Semugadziri ini ndine mikana yakawanda yekugadzira zvinhu uye kuwana masendi mashoma kubva munharaunda iyoyo, nekuti pane akati wandei zvinodiwa kufukidza uye ivo vanhu vakura vane mari.
Pindura kune RimaSeid Warp
Pandakatanga kushandisa GNU / Linux makore apfuura, ndakazviita naDebian 7, ndisingazive nezve Linux.
Iye zvino ndiri kushandisa Debian 10 uye pano ini ndinowana zvese zvandinoda. Muchokwadi, ndanga ndichiregedza kuWindows kwenguva yakati rebei uye handina kana kumbofunga nezvekuisa WINE.
Kubatsira kwangu, pamwe, kuve neiyo nguva yese yandaida kusangana naye uye kutora iyo leap, asi haina kuoma. Iwe haufanire "kugadzira" Linux kuti utaridzike seWindows uye upe izvi kune newbies. Debian ndiyo yakanyanya kufanana neWindows pane ...
Iyo inyaya yekuvatendisa kuti ivo vanowana chimwe chinhu chiri nani zvirinani muLinux, chimwe chinhu chavasina kumborota nekuda kwekureruka kwekutya shanduko, inova chikamu chehunhu hwevanhu.
Kunyangwe Linux yakasarudzwa kuita iyo leap pakupedzisira haina basa, mhedzisiro ichagara iri yekunakidzwa mhando yeLinux nenyika yayo.
Mushure menguva yandave ndichiishandisa ndakaisa maoko angu mumoto waDebian
Zvirokwazvo, kwandiri, sarudzo yakanakisa ndeye Zorin os nekuda kwezvikonzero zvakati.
Iyo yakafanana chaizvo neWindows 7.
Iyo ine mashoma masarudzo ekumisikidza (kungofanana neWindows) inova mukana kune newbies, kunyanya avo vanoda sisitimu yekushandisa senzira (uye kwete magumo) ekuita mabasa ezuva nezuva.
Iyo inouya ine yakawanda pre-yakaiswa software inoita zvakafanana mabasa kuWindows.
Iyo yakagadzikana uye inokurumidza.
Izvo hazvipedze zvakawandisa zviwanikwa (kana komputa yako yakati rebei unogona kuisa iyo Lite vhezheni).
Iwe unogona zvakare, sezvandiri, tora iyo yakabhadharwa vhezheni Yekupedzisira iyo inouya neyakawandisa software, uyezve iwe unogamuchira rutsigiro (rwakanyanya kubatsira kune newbies) kubva kune vanogadzira, iwe uchipa mukugovera.
Iyo mitambo yandaisa newaini inomhanya pasina dambudziko. Munzvimbo imwechete iyi pane zviuru zvemitambo yeGnu Linux nekutenda kune Steam nevamwe.
Yako software inogara ichigadziriswa kune yazvino vhezheni.
Zorin lite pasina mubvunzo ndiyo yakanakisa pane dzese. Lightweight, Hardware inoenderana (iyo yakabva yaziva printer yangu, nepo Windows 10 yaida madhiraivha), ine Firefox neLibreoffice yakaiswa pa512mb.
Yakanaka uye inoshanda dhizaini.
Nenzira, Elementary Os akange asipo, iyo kunyangwe iine kutaridzika kweMac, iri nyore kushandisa kune avo vatsva kuLinux.
Kwazisai, kwemakore ndanga ndichifunga nezvekuchinja kuita linux, asi ini handina kuzviita nekuti handina vimbiso yekuti kugoverwa kwakasarudzwa kunoenderana nevese vatyairi pakombuta yangu, sezvo iri yechinyakare. Notibhuku randinoshandisa parizvino iLenovo kubva muna2008, inouya ne windows vista.
Pakutanga ndaive neimwe kubva 2007 na windows xp, ndakaedza kushandisa linux asi haina kuziva vhidhiyo kadhi nekuti yaive ati radeon.
Saka ndosaka ndisina kuyedza kuisa linux, asi ini ndingafarire.
Unogona kuyedza kuyedza ne liveCD / DVD kana USB kuti uone kana ichiziva ese Hardware uye kana zvirizvo wobva waiisa kana kwete (iwe sarudza) kana iwe unogona kuve neese maSystem Anoshanda.
Ye2008 notibhuku iwe unogona kuyedza akati wandei, ini ndaizoedza Lubuntu (haina kukwezva kwazvo asi inopfuura kuzadzisa zvayinovimbisa kana iine processor yakaganhurirwa uye ndangariro diki senge iwo ese emabhuku uye iwe unogona kuyedza iyo liveCD).
Pamwe iwe unofanirwa kumirira kusvika Kubvumbi 2020 panouya itsva LTS vhezheni (2004 vhezheni) yeLubuntu (LTS = yakawedzerwa rutsigiro, une makore matatu ekutsigirwa pasina matambudziko uyezve unogona kugadzirisa kune inotevera uye ese pasina kushandisa 3 cent)
Ini ndakaiisa mumalaptop maviri eimwe kubva muna 2 uye imwe kubva muna 2006 uye inoshanda zvinoshamisa kanokwana ka2007 nekukurumidza kupfuura nemaonero aive akaverengerwa kubva kufekitori, ini ndine yazvino LTS (5), yakamirira inotevera Kubvumbi (1804).
Muchina wangu unotsigira w 10 Ini handina matambudziko mune izvo nyaya yekuda iyo Lite vhezheni. Dambudziko nderekuti iri 32-bit. Ndeipi Linux yandinogona kushandisa nekuti havagone kubvuma kumira vachikomberedza nehurukuro uye voita imwe-nguva kutsiva w7?
Ubuntu, zorin kana linux mint zvinoshanda mushe kwazvo mumakumi matatu nematatu, hapana musiyano pakati pazvo, "mune zvinyorwa zvirokwazvo, zvakanaka kutsvaga dzidziso kana chimwe chinhu kwavanofananidza iwo madhesiki akashandiswa zvakanyanya" uye tarisa.
Ndakaenda kuLinux mint uye kubva
Ini handioni chaizvo kukosha kwekuita kuti interface iite seWindows, yakavigwa ini. Zuva rakanaka…!!!
Ini ndiri ubuntu ultra, kwandiri pasina mubvunzo sarudzo yakanakisa yekutanga ne linux, isina kuwira mukufanana windows, nekuti ini handioni chikonzero chekuti ifanane neiyo interface, uye haisi iyo iyo Microsoft yagadzirisa nyika yehupenyu madhesiki hehe #UBUNTU
Kukudzwa ikoko kunoenda kuApple's Mac OS, asi KUSAVE kuenda kuMicrosoft yeWindows.
Ini ndiri wekutanga muLinux uye iyo nyowani yekuvandudza yeModicia OS (yekupedzisira). Ini ndinofunga kune vepamusoro. Zvese zvinoitwa mushe kwazvo. Unogara uchiisa zvinhu, asi zviri kufamba zvakanaka.
Alonso marroquin akadaro
Rondedzero yacho inoita senge isiri chaiyo kwandiri, zviri pachena kana iwe uchimhanyisa W7, zviwanikwa zvePC zvishoma uye uchazoda irinyore runyorwa, v.gr.: Linux mint neXFCE, kwete nesinamoni.
Pindura kuna Alonso Marroquin
Mune yangu kesi Linux Mint yakandipa yakanaka Hardware rutsigiro. Kuenderana neUbuntu / Debian uye kunyanya nharaunda kwakaita kuti zvinhu zvive nyore kwandiri mukutama.
Manheru akanaka, ini ndinokuudza kuti vashandisi veLinux vaona kuti Zorin OS ndiyo prototype ye Windows 10, unoziva here izvo zvinosanganisira? Telemetry muWindows 10 senge muZorin, zvinoreva kuti ivo vari kutumira ruzivo vasingazivikanwe vasina kutitaurira kuti rwakavanzwa nekutadza mukugovera.
Saka zvinokwana kuita zvese ndangariro uye dhisiki kushandiswa, rombo rakanaka vanhu.
Ini ndinofunga kuti pakupedzisira sarudzo yakanakisa ndeye Q4OS, kwete zvakanyanya nekuda kwechitarisiko chayo, icho chinenge chakangofanana neWindows XP, asi nekuti inomhanya chaizvo pamakomputa ezvepasi-zviwanikwa. Iyo ine 32-bit vhezheni uye yakagadzikana kwazvo.
Unogona kuwana bhuku iri nekuti ini ndinoshandisa windows kwoupenyu hwangu hwese uye zvinoita seni kuti ivo vari kumanikidza vashandisi kuchinjira kune linux nekuda kwekuti windows 7 haichazoshandiswa sezvo paine dzimwe shanduro dze mahwindo
Handifunge kuti mumwe munhu akaisa pfuti mumusoro wako achikumanikidza kusiya Windows kana kukumanikidza kuti uverenge chinyorwa ichi. Ma troll anofarira sei kutamba munhu akabatwa!
Mashoko acho anoita seasina musoro zvachose kwandiri. Hapana munhu ari kumanikidzwa kuchinjira kuGnu Linux, sarudzo dzinongounzwa chete kune avo vanoda kuyedza iyi sisitimu inoshanda. Kana iwe uchida kuenderera neWindows ndiyo sarudzo yako. Zvakare, ino inzvimbo yeGnu Linux, saka zviri pachena kuti iyi sisitimu yekushandisa iri kutaurwa nezvayo. Kana iwe uchida kutaura nezve Windows, chingoshanyira rumwe rudzi rwepeji.
Jorge Sanchez akadaro
Kune dzidzo ini ndinoda chikorolinux nemazana amaturusi akagadzirira uye akagadziridzwa munzira yakanakisa
Pindura Jorge Sánchez
Ndine shamwari sere dzichiri kushandisa Windows 8 uye iyo 7 yakaenda kuWindows 8. Kune vashandisi veLinux vanoti Linux iri nyore, ichokwadi asi hazvigone kunzi munhu asina kumbobvira aisa Linux haana kuda rubatsiro. Ndakaverenga mune zvakataurwa zvakanyanya ivo vanoti iwe wakanganwa kugovera kwakadaro. Ndechipi chinyorwa icho munhu asina kumbobata Linux anogona kuisa kwete kuti ndeipi yaunofarira. Ndakaverenga mune imwe chinyorwa chimwe chakati munhu wese anotsvaga hupenyu uye oenda kunoedza kugoverwa. Zvakanaka, ndakaverenga izvo uye kana ndaifanira kusiya Windows 10, ini ndaizoenda ku7 kana Mac.Kushaya ndangariro, wakambotanga kushandisa Linux uchiziva zvese uye ini handidi rubatsiro?